संसारकै अनौठो आलु, जुन आलुको सेवनबाट मानिस सँधै जवान नै रहन सक्छ । (यस्ता छन् तथ्यहरु) – Online Nepalaja
संसारकै अनौठो आलु, जुन आलुको सेवनबाट मानिस सँधै जवान नै रहन सक्छ । (यस्ता छन् तथ्यहरु)
February 7, 2021 109
आलुको सेवनबाट दिर्घायु बन्ने खबर कहिल्यै सुन्नु भएको छ ? यदि छैन भने यो खबरले तपाईको आयु नै बढाउन मद्धत गर्नेछ । प्रसंग हो दिर्घायु बनाउने आलुको ।।
जसलाई बैज्ञानिकहरुले केही वर्ष खर्चेर सफल परिक्षण गर्न सषम भएका छन् । टेस्ट ट्यूबमा तयार गरेर पछि माटोमा रोपिने यो आलु वैजनी रंगको छ । सामान्यतया बजारमा पाइने आलु भन्दा अलिक भिन्न फरक किसिमको छ । अनौठो प्रकृतिको यो आलुमा भिटामिन सीको मात्रा तीन गुणा धेरै हुन्छ ।।
जसमाअक्सिकरण निरोधक तत्व चार गुणा बढी भएको बैज्ञानिकको भनाई छ । अनुसन्धानमा संलग्न बैज्ञानिकहरुका अनुसार अक्सिकरण निरोधक तत्वले बुढोपन रोक्ने बताइएको छ । अन्य आलुको जस्तै स्एवाद हुने आलुका करिब २० नयाँ प्रजाति तयार भएको बताइएको छ ।।
याे पनि, एक्कासि के भयाे यस्ताे चर्चित माेडल अञ्जली अधिकारी लाई ? (भिडियोमा हेर्नुहाेस्) ।
सामाना म्युजिक क्रियशन युटुब च्यानल मार्फत ‘पानी पाए पछि’ गीतको भिडियो सार्वजनिक गरिएकाे छ । सामाना शाह`को शब्द सङ्कलन र केशव श्रेष्ट र अञ्जली अधिकारी को अभिनय रहेको लोकदोहोरी गीत ‘पानी पाए पछि’को भिडियो केही दिन अगि सार्वजनिक भएको गरिएकाे हाे ।।
चर्चित गायिका बिष्णु माझी र भगीरथ चलाउने`को स्वरमा रहे`को गीत ‘पानी पाए पछि’ मा भगीरथ चलाउने`को सङ्गीत रहेको छ भने बिनोद पराजुली`को एरेञ्ज रहेको छ । त्यस्तै गीतको रेकर्डिङ राजेन्द्र बाजुरालीले गरेका हुन् ।।
अञ्जली अधिकारी र केशव श्रेष्ट`को अभिनय रहे`को गीत`को भिडियो`लाई सिर्जन बरालको निर्देशन हुन् भने राजेश घिमिरेको छायाँकन गरेका हुन् । भिडियोलाई अमृत चापागाईंको सम्पादन गरेका हुन् । प्रेम कहानी`मा आधारित कारुणीक भिडियो`को दृष्य निर्माण जनता डिजिटल फिल्मस् नेपाल`ले गरेको हो ।
Prevपृथ्वीमा घटेका र भएका १९ रोचक घटना र वस्तु, जुन सुन्दै अचम्म लाग्छ (तस्विर सहित)
Nextपेन्सनवाला लाहुरेले बुढेशकालमा श्रीमतीलाई यस्तो गरे, के हुन लागेको यस्तो? (हेर्नुहोस भिडियो)
होसियार हुनुहोस् : सुतेको ठाउँमै मरिएला (अवश्य पढ्नुहोला)